Efa antitra, kabarim-pankahalana, fahalalahan’ny gazety: lohahevitra goavana resahana amin’ny fifidianana filoham-pirenena 2019 ao Nizeria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Janoary 2019 16:20 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, русский, Swahili, English
Fizotram-pandatsaham-bato nandritra ny fifidianana filoham-pirenena Nizeriana tamin'ny 28 martsa 2015, tany Abuja, Nizeria. Sary avy amin'ny Masoivohon'i Etazonia/Idika Onyukwu. Fanondroana ny sary Image Attribution: Non-Commercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)
Hanatontosa fifidianana ho filoham-pirenena i Nizeria amin'ny 16 Febroary 2019, ary mitodika amin'izany fifidianana izany ny maso rehetra amin'ny maha-fisedrana hanaporofoana ny tanjaky ny fenitry ny demaokrasia, ny soatoavina sy ny firaisankina ao Nizeria.
Tamin'ity taona ity dia dimy ireo kandidà matanjaka amin'ireo kandidà filoham-pirenena 73 mifaninana. Anisan'ireo mpifaninana goavana roa ny filoha ankehitriny Muhammadu Buhari (APC Kongresin'ny Liam-pandrosoana Rehetra) sy ny kandidan'ny mpanohitra sady efa filoha lefitra teo aloha Atiku Abubakar (Antoko Demaokraty Entim-bahoaka).
Ireo kandidà telo hafa dia: Obiageli Ezekwesili, Kingsley Moghalu sy Omoyole Sowore, izay nantsoina hoe “hery fahatelo” satria tsy manana traikefa ara-politika izy ireo saingy mbola manana anjara lehibe amin'ny fifaninanana.
Ao anatin'ny tabataban'ny fanentanam-pifidianana sy ny fientanentanana eo amin'ireo mpanohana – na anaty aterineto na ivelan'ny aterineto – ireto no lohahevitra lehibe mety tsy ho hita ao anatin'ny tabataba
Vakio bebe kokoa: Fantaro ireo kandidà ho filoham-pirenena 2019 ao Nizeria
Ny olan'ny lehilahy antitra sady mahery
Samy manana tantara lava momba ny fanaovana politika ao Nizeria ireo mpifaninana roa lehibe, Buhari, 76 taona, sy Atiku, 72 taona ary mahatonga ny maro hanontany ny fahasalaman'izy ireo sy ny faharetany amin'ny maha-hanantena ho filoham-pirenena.
Noho ny fiafaran'ny fitondran'ireo mpitondra naharitra ela tahaka ny filoha Afrikana Tatsimo, Jacob Zuma, 76 taona, sy Robert Mugabe ao Zimbaboe, 94 taona izay noterena niala teo amin'ny fitondrana taorian'ny 37 taona maha-filoham-pirenena, dia toa tsapa tahaka ny fiafaran'ireo fitondrana notarihin'ireo lehilahy antitra sady lehilahy mahery any Afrika izany. Saingy tsy naharitra io fanantenana io. Paul Biya, 84, no voafidy indray ho filohan'i Kamerona, ka izy no mpitarika ara-politika antitra indrindra aty Afrika atsimon'i Sahara.
Nanjary fiheverana ara-politika goavana ny fahasalaman'ireo mpitarika Nizeriana taorian'ny nahafatesan'ny filoha teo am-perinasa Umaru Musa Yar’Adua tamin'ny 5 May 2010. Niteraka fahabangana teo amin'ny fahefana ny aretin'i Yar'Adua sy ny tsy fisian'ny fitohizan'ny fitondram-panjakana satria tsy nanolotra izany (fahefana) tamin'ny filoha lefiny, Goodluck Jonathan talohan'ny nandehanany tany ivelany izy.
Nandeha tany amin'ny Fanjakana Mitambatra (Royaume-Uni) im-polo teo ny filoha am-perinasa Buhari mba hitsabo tena amin'ny aretina tsy nampahafantarina mihitsy. Nandany “170 andro mahery tany Londra noho ny fitsaboan-tena izy hatramin'ny naha filoha azy tamin'ny taona 2015″, hoy ny New York Times.
Manana vintana tsara kokoa ve ny kandidà tanora? Tamin'ity taona ity dia kandidà 10 no latsaky ny 40 taona ary kandidà 16 no eo anelanelan'ny 45-49 taona. Saingy mety tsy hahomby ny kandidà tanora satria ny tantara lavabe momba ny fitondrana miaramila ao Nizeria dia nampiditra kolontsaina mpiantsehatra ara-politika izay manana fahefana sy harena hamatsiana ny politikan'ny antoko ary mila fotoana sy fifandraisana ny famolavolana izany.
Samy manana fototra ara-politika matanjaka i Buhari sy Abubakar. Manana mpanara-dia mahatoky ao amin'ny faritra avaratry ny firenena i Buhari raha hita fa ankatoavin'ny ankamaroan'ny foko sy fivavahana samihafa ao amin'ny firenena kosa i Abubakar. Toa tsy antony nahazoan'izy ireo fanohanana sy fitokisana ny taonan'izy ireo.
Foko sy ny fivavahana
Fantatra amin'ny anarana hoe firenena miavaka amin'ny foko i Nizeria – efa nanana anjara toerana lehibe teo amin'ny fifidianana sy ny politika ankapobeny ny foko sy ny finoana. Nampiseho ny fifidianana tamin'ny taona 2015 fa nahazo vato betsaka avy amin'ny fanjakana misy azy ireo avy sy faritra ara-jeografika politika ireo mpifaninana roa matanjaka, “araka ny lahatsoratra iray tao amin'ny Journal of African Elections. Ary koa nampiasaina hisarihana mpifidy ny fihetseham-po ara-poko. Nipoitra tamin'ny aterineto sy ivelan'ny aterineto ny kabarim-pankahalàna ara-poko, taloha sy taorian’ny fifidianana filoham-pirenena 2015.
Tahaka izany ihany, tamin'ny taona 2017, nanao fanairana noho ny kabarim-pankahalàna ara-poko tafahoatra izay saika nandrava ny firenena ireo mpanoratra Nizeriana sasany. Resy tamin'ny fitsapa-kevi-pifidianana ny filoha teo aloha Goodluck Jonathan noho ny tsy fahombiazany nitantana ny daroka baomba nataon'ny vondrona milisy Islamika Boko Haram izay nanakorontana ny firenena sy niteraka tsy fandriampahalemana miely patrana. Nitarika resabe manerantany tamin'ny tenirohy #BringBackOurGirls (Avereno ny zanakay vavy) ny fakàna an-keriny ireo tovovavy mpianatra tao Chibok nataon'ny Boko Haram rehefa nazava tamin'ny olom-pirenena fa tsy ampy ny fidiran'ny governemanta an-tsehatra.
Samy miankina amin'ny fikambanana ara-poko i Buhari sy i Abubakar mba hahazoana vato. Buhari, tavaratra (Fulani/Miozolomana), nitazona an'i Yemi Osibanjo ho kandidà filoha lefitra mba hahazoana vato avy amin'ny tatsimo-andrefana (Yoruba/Kristiana) ao amin'ny firenena. Abubakar, tavaratra (Fulani/Miozolomana) kosa nisafidy ny kandida filoha lefiny avy any atsimo atsinanana (Igbo/Kristiana).
Satria avy amin'ny vondrona ara-poko sy ara-pivavahana iray i Buhari sy Abubakar, angamba tsy ho henjana tahaka ny fifidianana tamin'ny taona 2015 ny fihenjanana raha nifanandrina tamin'i Buhari i Jonathan Goodluck, vondrona tatsimo vitsy an'isa Ijaw Kristiana.
Fahalalaham-pitenenana sy ny fahalalahan'ny gazety
Voampanga tamin'ny fanitsakitsahana marobe ny zon'olombelomba ny fitondran'i Buhari ary tenirohy marobe no nalaza tamin'ny media sosialy tamin'ny taona 2018, mitaky ny famotsorana ireo mpiserasera sy mpanao gazety nogadraina.
Tamin'ny 17 martsa 2016, niharan'ny herisetra sy nogadrain'ny polisin'ny Nizeriana tamin'ny fanafihana ny fahalalaham-pitenenana ilay mpanao gazety Nizeriana Yomi Olomofe. Nosamborina tamin'ny andron'ny taombaovao ilay mpanao gazety Nizeriana Daniel Elombah sy Timothy Elombah rahalahiny noho ny lahatsoratra izay tsy nosoratan'izy ireo akory. Tamin'ny volana aogositra tamin'io taona io ihany, nosamborina ilay mpivarotra Nizeriana Joe Fortemose Chinakwe noho ny nanomezany anarana ny alikany hoe “Buhari”.
Nosamborin'ny fiarovam-panjakana (DSS) tao amin'ny biraony tao Yenagoa, Fanjakana Bayelsa tamin'ny 21 Jolay 2016 i Jones Abiri, mpamoaka lahatsoratra ao amin'ny Weekly Source. Nalaza nandritra ny andro maromaro tao amin'ny Twitter ny tenirohy #FreeJonesAbiri mandra-pamotsotra an'i Abiri tamin'ny 15 Aogositra 2018, taorian'ny fanagadrana azy roa taona.
Nalaza ny #FreeSamuelOgundipe rehefa nogadrain'ny borigady manokan'ny paikady nandritra ny telo andro ilay mpanao gazety Nizeriana, Samuel Ogundipe rehefa tsy nety nilaza ny loharanom-baovaony tamin'ny lahatsoratra mikasika ny fanakanan'ireo mpitandro ny filaminana ireo mpanao lalàna mba tsy hiditra ao amin'ny Antenimieram-pirenena Nizeriana tamin'ny voalohandohan'ny volana Aogositra 2018.
Nosamborina indray tamin'ny Desambra 2018 i Deji Adeyanju, mpikatroka ara-politika sady mpikambana ao amin'ny antoko mpanohitra ary nogadraina avy eo noho ny “fanangonan-tsonia vaovao” nataony.
Naneho ampahibemaso ny tsy fankasitrahany ny fahalalahan'ny gazety sy ny fahalalahana miteny i Buhari. Tamin'ny kabariny tamin'ny mpanao lalàna tamin'ny herintaona, nanambara izy fa ” tsy maintsy manaiky ny fiambonian'ny fiarovana ny firenena sy ny tombontsoam-pirenena ny fampanjakana ny lalàna.”
Etsy ankilany, nampanantena i Abubakar fa hametraka “rafitra fitantanana iombonana” izay hampiasa ny fahasamihafana ao Nizeria ary hitazona “tontolo anjakan'ny rariny sy ny hitsiny izay arovan'ny governemanta mangarahara ny zon'ny olom-pirenena rehetra.”
Ny fotoana ihany no hilaza hoe ahoana no hiafaran'ireo lohahevitra ireo mandritra ny vanim-potoana fifidianana sy ny any aoriana.